Mashandisiro ekushandisa Mautic. Nzvimbo yakavhurika sosi yekushambadzira | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura akataura yeMaututic. Ndezve chishandiso chakavhurika sosi yekushandura mabasa ekushambadzira. Ndakaona zvichinakidza kukuratidza kuti zvinoshanda sei.
1 Chii chinonzi Mautic
2 Mashandisiro ekushandisa Mautic
2.1 Tora uye uteedzere tarisiro
3 Mashandisiro ekushandisa Mautic. Series Index
Chii chinonzi Mautic
Mautic chirongwa chakavhurika sosi chakagadzirwa naDavid Hurley uye chinodzorwa nekambani imwechete kuseri kweDrupal zvemaneja maneja uye nerubatsiro munharaunda. Iyo ine yakabhadharwa vhezheni iyo inoitirwa pamaseva ayo uye yemahara yekuzvibata-wega pane yemushandisi wega.
Icho chinangwa kuseri kwechirongwa ichi kuenzana. Nharaunda yeMautic inotenda mukupa munhu wega wega simba rekunzwisisa, kubata uye kukura bhizinesi ravo kana sangano.Kubatsira kuita izvi, vanogadzira vanotsvaga kuisa zvine simba kushambadzira otomatiki software mumawoko emumwe mushandisi
Kana iwe usina kuverenga chinyorwa chakapfuura, ndinokuyeuchidza nezve pfungwa yekushambadzira otomatiki.
Kushambadzira otomatiki tekinoroji iyo inogadzirisa kushambadzira maitiro uye muchinjikwa-unoshanda mushandirapamwe, kuburikidza nenzira dzakawanda, otomatiki.
Nekushambadzira otomatiki, makambani anogona kunongedza vatengi vane otomatiki mameseji kuburikidza neemail, iyo webhu, vezvenhau, uye zvinyorwa. Meseji dzinotumirwa otomatiki, zvinoenderana neseti yemirairo inonzi workflows. Kufamba kwebasa kunogona kutsanangurwa template, yakagadzirirwa kubva pakutanga, kana kushandurwa yepakati-mushandirapamwe kuti uwane mibairo iri nani.
Kuishandisa kunobatsira iwe kuwana, chengeta uye nekumisikidza vangangove vatengi, pamwe nekuyera kwese kudzoka pane yako mushandirapamwe kudyara.
Mashandisiro ekushandisa Mautic
Tora uye uteedzere tarisiro
Kana iwe uchidarika makumi matatu uye uchishandisa email, iwe pamwe uneta nekugamuchira spam. Muzviitiko zvakawanda zvezvinhu izvo zvisina kana kufarira iwe (Changu chandaifarira ndechimwe chakandipa kuti ndive neyangu Swiss bank. Ini ndinopika kuti ndakaedzwa). Nekufamba kwenguva, anti-pam mitemo yakatanga kuomarara uye mabasa ema mail akawedzera kushanda kweavo mafirita.
Vatengesi veDhijitari vaive vachinatsa zano ravo uye ivo vakarangarira zano raPeter Drucker. "Kushambadzira hakusi kuenda kunotengesa, kuri kuita kuti vauye kuzokutenga." UyeKutumira kwakawanda kwakachinjira kumafomu uye mapeji ekumhara. NaMautic unogona kugadzira mafomu ekuisa pane chero webhusaiti kana peji rinosanganisira fomu.
Ngatinyatsoongororai pfungwa mbiri idzi. Fomu rakangodaro, fomu senge chero eayo iwe aunogadzira neGoogle Docs. Iyo inoshandiswa kuunganidza data. Peji rekumisikidza iri peji rewebhu iro chete basa rayo kuve nemavara nechipo uye fomu iyo mutengi anozadza nedata ravo. Tarisa uone iyi email.
Email kuendesa kune inogara peji
Chinyorwa chinotanga nekupihwa kwepdf inovimbisa kubudirira. Tsanangura zvirimo pazasi uye dzokorora chinongedzo. Kuimanikidza kunotora iwe kune ino yekumhara peji.
Inotamisa peji nechipo uye fomu rekurodha pasi
Kana tasvika pane peji rekumhara tinowana chivimbiso, hupenyu hwoumbozha, hupfumi uye kubudirira. Uye, kuti apedze kutapira, anojekesa kuti bhuku rinowanzo kuve nemutengo wemadhora makumi matatu nemapfumbamwe. Ehezve, chero munhu anoda kurodha pasi anofanirwa kuzadza fomu.
Zvakanaka, ini ndiri wekutanga kubvuma kuti ndingadai ndakawana muenzaniso wakakomba zvishoma. Asi, inoshanda kuratidza kuti maitiro acho akaita sei.
Kushandisa mapeji ekumhara kune zvimwe zvakanakira pane mawebhusaiti
Iwe haufanire kunetseka nezve yekutsvaga injini algorithm. Sezvo chinongedzo ichi chakatumirwa nepositi kana pasocial network, chinzvimbo mumainjini ekutsvaga hachina basa.
Mari yakaderera. Iwe haufanire kunge uine dura remhuri yega yega yechigadzirwa, shandisa pane yakaoma webhu dhizaini, kana kuhaya ine simba yekutambira.
Panguva imwechete iyo inobvumidza iwe kubvisa kutsamira pasocial network. Mapati anofarira anoenda kune yako webhusaiti uye iyo data inochengetwa mudura rako. Kunze kwekunge iwe uchida icho, ivo havagovaniswe nemumwe munhu.
Mashandisiro ekushandisa Mautic. Series Index
Chikamu chechina (mukugadzirira)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mashandisiro ekushandisa Mautic. Nzvimbo yakavhurika sosi yekushambadzira
Chii chinonzi Mautic? Vhura sosi chikuva chekushambadzira